राजनीतिमा युवाको आवश्यकता छ, तर पुरानाको त्याग र तपस्यालाई बिर्सन हुँदैन
काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिसँग फरकधार
फरकधार / १ भदौ, २०७८
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस बारा​का सभापति जयचन्द्र चौरसिया​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
जहाँ निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व आउँछ, त्यहाँ कस्तो नेतृत्व आउने भन्ने कुराको निक्र्योल पहिला गर्न सकिन्न । महाधिवेशनको बेला आएपछि आ–आफ्नो जिल्लाको परिस्थितिबारे छलफल हुने हो । निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि फलानो ठिक छ फलानो बेठिक भन्नु गलत कुरा हो । यदि निर्वाचन प्रक्रिया नहुने भएको भए यही हो नेतृत्व भनेर आ–आफ्नो विचार राख्न सकिन्थ्यो ।
अब निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरुबीच कुन किसिमको नेतृत्व ल्याउने भन्नेबारे विमर्श हुनुपर्छ । लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । यसलाई कुन स्थितिमा पुर्याउने भन्ने कुरा आमकार्यकर्ताको हातमा छ । किनभने कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, विधि विधानमा चल्ने पार्टी हो । विधानतः प्रतिनिधि चयन हुने हो । चयन भएका प्रतिनिधिले अधिवेशनमा आ–आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ ।
एउटा कुरा के हो भने, युवा वा पुरानो जो भए पनि उहाँहरुको भूमिकालाई सधैँ सम्झनुपर्छ । राजनीतिमा युवाहरुको आवश्यकता छ । तर, पुरानाहरुको त्याग, तपस्या र क्रियाकलापलाई बिर्सन हुँदैन । विधानतः चल्ने, विधिसम्मत हिँड्ने कुरामा कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ता एकमत हुनुपर्छ । कांग्रेसमा भएका विसंगतिलाई हटाएर विधान र विधिअनुसार चलाउन सक्ने, पार्टी बचाउने खालको नेतृत्व आउनुपर्छ ।
आफ्नो जिल्लामा भएका क्रियाकलापलाई मात्र ध्यान दिने, गुट खडा गर्नेजस्ता काम भइरहेका छन् । हाम्रै बारा जिल्लालाई लिऔँ, एक पक्षले आफ्ना कुरालाई स्थापित गर्नका लागि जिल्लाबाट क्रियाशीलता सदस्य आएकै छैन भन्ने, केन्द्रबाट ठूला नेता भन्नेहरुले नै अनशन बसाइदिनेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् ।
विधि र विधानबाट आएका क्रियाशील सदस्यहरुलाई प्रभावित गर्नका लागि यस्तो काम भएको देखिन्छ । यहाँका ठूला नेतृत्ववर्गले नै विधानलाई प्रभावित गर्न खोज्दै छन् । जबकि जिल्लाबाट वडादेखि पालिका, प्रदेश, जिल्लासम्म निर्णय भएका कुरालाई विधिसम्मत नहोस् भन्नका लागि यस्तो भएको देखिन्छ । अहिले पनि म हेर्दै छु, ती फाइल खुलेका छैनन् ।
कांग्रेसलाई कानुनी राज्यको अवधारणा र कानुनअनुसार हिँडाउने बिपी कोइरालाको अवधारणामा धावा बोल्न खोजिएको देखिन्छ । केन्द्रमा रहेका आफूलाई ठूलो भनाउने नेताहरुले नै प्रभाव पार्न खोजेका छन् । हाम्रो सोच भनेको विधिसम्मत ढंगबाट आएकाहरुले कानुनी मान्यता पाऊन् भन्ने हुनुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीमा अहिले यो समस्या छैन । मेरो जिल्लामा झनै यो समस्या छैन । पार्टी र केन्द्रमा एकसे एक त्यागी नेता छन् । स्वयं बिपीका छोराहरु पनि राजनीतिमा छन् । तर, बिपीका छोरा भएकै कारण मात्रै राजनीतिमा स्थापित भएका होइनन् । उनीहरुले पनि कांग्रेसका लागि काम गरेका छन् ।
हामी प्रकाशमान सिंहलाई पनि लिन सक्छौँ । उहाँ गणेशमानका पुत्र भएका कारणले मात्र ठूलो हुनुभएको होइन । उहाँले विभिन्न एकाइमा काम गरेर अघि बढ्नुभएको हो । नातावाद र कृपावादबाट मात्रै कांग्रेस चलेको छैन । विभिन्न नेताका छोराहरु भएका कारणले मात्र नभई क्षमताका आधारमा पनि उहाँहरुले कांग्रेसमा नेतृत्व गर्न पाएका हुन् ।
विविधतामा नै एकता हुन्छ । जहाँसम्म कांग्रेसको लामो इतिहास पल्टाउँदा पनि राणाशासन वा पञ्चायती शासनको बीचमा कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि, विधिको शासनका लागि, लोकतान्त्रिक शासनका लागि देशमा गणतन्त्र स्थापनासम्मका लागि भूमिका खेल्यो ।
आज पनि लोकतन्त्र संस्थागत गराउन कांग्रेस लागेको छ । एक मात्र पार्टी कांग्रेस धेरै दुःख भोगेर पनि कोरोनाको महामारी वा अन्य साना समस्यासँग डराउनुहुन्न । यसको वैज्ञानिक समाधानका लागि कांग्रेसको संवैधानिक र वैधानिक संकट समाधानका लागि डटेर लाग्नुपर्ने बेला छ । आफ्नो अधिवेशन गर्नैपर्छ । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोलगायत समस्यालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
‘हामी संकटपूर्ण महाधिवेशनको मुखमा छौँ’— काभ्रेपलान्चाेक सभापित
‘युवाहरुले धारणा नबदल्ने हो भने नेतृत्वमा आउँदैनन्’— भक्तपुर सभापत
प्रकाशित मिति : भदौ १, २०७८ मंगलबार २०:३५:३, अन्तिम अपडेट : भदौ १, २०७८ मंगलबार २०:४१:१८